Hindiya: Wiil Muslim ah oo loo dilay muran ka dhashay dabaal-degga Sanadka Cusub | Saxil News Network
Hindiya: Wiil Muslim ah oo loo dilay muran ka dhashay dabaal-degga Sanadka Cusub
Lahaanshaha sawirkaNIRAJ SINHA
Image captionDad dilka ka careysan ayaa goobta isugu soo baxay
Wiil Muslim ah ayaa sida loo garaacayay lagu dilay gobolka bariga Hindiya ku yaalla ee Jharkhand, kaddib markii la sheegay in koox uu ka codsaday inay joojiyaan muusigga dhawaaqa dheer ee ay ugu dabaal-degayeen Sanadka Cusub.
Arrintan ayaa ka dhacday magaalada Mandar, oo u dhow caasimadda gobolkaasi ee Ranchi.
Dadka ayaa Talaadadii xiray waddooyinka waaweyn iyagoo codsanaya in la soo xiro dadka looga shakisan yahay dilka ninkaasi, balse waxaa isla markiiba kala cayriyay booliiska.
Ciidamo ammaanka suga oo dheeri ah ayaa goobta lagu daad-gureeyay si ay u ilaaliyaan nabadda qowmiyadaha Muslimiinta iyo Hinduuga halkaasi ku wada nool.
Waseem Ansari, oo 19 jir ahaa, ayaa ka shaqeynayay magaalada Pune wuxuuna xaafaddiisa dib ugu laabtay labo maalin uun kahor.
Image captionBooliiska ayaa ka codsaday qowmiyadaha inay ka fogaadaan rabshado
Sarkaal sare oo booliis ah ayaa Laanta Afka Hindiga ee BBC u sheegay in baaritaan horudhac ah oo la sameeyay lagu ogaaday in kooxda wiilka dishay ay shiteen muusig ay ugu dabaal-degayeen Maalinta Sanadka Cusub.
Wuxuu sheegay in Waseem Ansari iyo labo saaxiibbadiis ah ay u tageen kooxda una sheegeen inay joojiyaan muusigga dhawaqa dheer. Arrinta ayaa muran isku beddeshay kaddibna kooxda ayaa weerartay Waseem oo dishay. Saaxiibbadiis ayaa la sheegay inay baxsadeen.
Sarkaalka ayaa intaa ku daray in labada qowmiyadood ay ka codsadeen inay nabadda dhowraan, dadka dilka geystayna la soo qaban doono.
Hasibul Ansari, oo isla xaafaddaasi ku nool ayaa BBC Hindi u sheegay in kooxdu ay xaflad ku dhigteen meel u dhow qabri Muslimiinta lagu aaso, sidaa darteedna uu Waseem ugu sheegay inay joojiyaan, kaddibna ay dileen.